MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: နေပြည်တော် မသာအိမ်မှ ဖဲဝိုင်းကြီးများ (၁)
သူသည် တပ်မတော်ဟုခေါ်သော တပ်ထဲတွင် မတော်သောသူများနေသည့် အရပ်ဝယ် အတော်ကြီးပင် အသားကျလာသည်။ ကျနော်တို့ရွာ စရောက်လာကတည်းကပင် ၇ွာဒကြီး ဦးစိန်ပြောင် ဖဲဝိုင်းများထောင်တော့သည်။ ကျေးရွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကြီးမားသော ဖဲဝိုင်းများ တည်ထားလေသည်။
ရွာဒကြီး ဦးစိန်ပြောင်၏ ဖဲဝိုင်းများမှာ (၄)မျိုးလေးစားခွဲထားသည်။
(၂) အာဏာ ရှာဖွေရေး ဖဲဝိုင်း
(၃) ငြိမ်းချမ်းရေး ဖဲဝိုင်း
(၄) နေရာမရှိ အာဏာမရှိသူများ၏ ဖဲဝိုင်း တို့ဖြစ်ကြ၏
ကျနော်တို့ရွာသို့ ရောက်လာသူများအားလုံး ဒကြီး ဦးစိန်ပြောင်ဖဲဝိုင်းနှင့် လွတ်ကင်းသွားသူမှာ အလွန်ရှားလှသည်။ ဒကြီးကလဲ ရွာမှ လုံခြုံရေးများအား သူထောင်ထားသော ဖဲဝိုင်းသို့ ၀င်ရောက်လိုသူများကိုသာ ရွာအတွင်းသို့ဝင်ခွင့်ပေးလေ၏။
ထိုကြောင့် ကျနော်တို့ရွာသို့ မည်သို့မည်ပုံဖြင့် ရောက်ရှိလာစေကာမူ ဒကြီးဖဲဝိုင်းသို့ ၀င်ရောက်ပြီး ၀ိုင်းထိုင် အိမ်ကိုင်သူ လုပ်လိုလျှင်လုပ် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ဘေးထိုးလေးဖြင့် ၀င်ရောက်ပတ်သက်ကြရသည်။
ကျနော်တို့ ၇ွာသို့ ၀င်လာမည့်သူအားလုံးအား မည်သို့သော အသွင်ပြင် ရှိစေကာမူ ဒကြီး ဦးစိန်ပြောင်မှ ၀င်လာလိုသူအားလုံးသည် ဖဲသများဖြစ်ရမည်ဟုလည်း စည်းကမ်းထုတ်ထားလေသည်။
ကျနော်တို့ ရွာ၏ ဖဲဝိုင်းအားလုံးတို့တွင် အမှတ်(၁) စီးပွားရေးဖဲဝိုင်း နှင့် အမှတ်(၂) အာဏာရှာဖွေရေး ဖဲဝိုင်းတို့အား ရွာနှင့် ကပ်လျှက်ရှိသော (China) ချီးနား ရွာမှ နောက်ကွယ်က ရွာဒကြီးနှင့် သူ၏ အပေါင်းပါများအား အရင်းနှီးအတော်တန်စိုက်ထုတ်ပေးထားပြီး အဆိုပါဖဲဝိုင်းကြီး(၂) ခုကို ကျင်းပလေသည်။
ရွာဒကြီး ဦးစိန်ပြောင်မှလည်း အလွန်ပင် လက်လိုက်လေသည်။ ယခင် ကျနော်တို့ရွာအတွက် ငွေများချေးပေးထားသော အခြားရွာများကိုပင် အမှုမထားတော့ပဲ ချီးနားရွာကိုသာ ၇ွာဒကြီးက မျက်နှာသာပေးလေသည်။ အကြောင်းမှာ ၇ွာဒကြီးမှ လိုအပ်လျှင် ငွေရေးကြေးရေးများတင်မက အခြားသော ရွာ၏ အာဏာတည်မြဲရေး စသော ကိစ္စများအားလုံးတို့အား ချီးနားမှပင် အကူညီပေးသောကြောင့် ချီးနား(China)ရွာအား သေရေးရှင်ရေးတမျှ အားကိုးအားထား ပြုထားလေသည်။
ရွာဒကြီး၏ ဘက်လိုက်မှု မတရားမှုသည်မကြာသေးခင်ကမှ ပေါ်ထွက်လာလေသည်။ ကျနော်တို့ ရွာအားတကယ်ကူညီပြီး ယခင် ပေးချေးထားသည့် တောင်ပုံယာပုံငွေများကိုပင် မယူတော့ပဲ လျော်ပစ်လိုက်သော ခပ်လှမ်းလှမ်းမနီးမဝေးမှ ရွာသားများ ယခုအသံထွက်လာလေသည်။ ဒကြီး စိန်ပြောင် ၏ လုပ်ရပ်ကား သူတို့အဖို့ မျှော်လင့်တကြီး ရှိနေခဲ့ရာမှ အားလုံး ပြုတ်ပြုတ်ပြုံန်းကုန်မတတ် ဆုံးရှုံးသွားသော ဂျပန် ရွာဖြစ်လေသည်။
၇ွာဒကြီးမှ ရွာအတွက် သွားလာရေးအတွက် လေယာဉ်ကွင်းတည်ဆောက်မှုများအား သူ၏အကြံစည်နှင့်လျော်ညီသော တောင်ကိုရီးယားရွာနှင့် ချီးနားရွာ များကိုသာ ကမကထပြု ဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်ပေးလေသောကြောင့် ဂျပန်ရွာမှ ဒေါသထွက်ကာ အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြ တုံ့ပြန်လေသည်။
– Japan is going to have to rethink its strategy for opening business opportunities in Myanmar, one of the last untapped markets in Asia, as Japanese consortia have failed to win international tenders to develop the country’s infrastructure.
There isaneed to revise (our) game plan,”ahigh-ranking government official said in the face of Japan’s poor record in securing contracts despite its promise of official development assistance and debt waivers for Myanmar.
ဆိုလိုရင်းမှာ ဂျပန်မှ မြန်မာပြည်အတွင်း လေလံများဆွဲပြိုင်ပွဲတွင်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာ အပေါ် ထားသော သဘောထားများ ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က ဆိုလာပါသည်။ ဂျပန်အဖို့ လူသားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ၀င်ရောင်ယှဉ်ပြိုင် လေလံဆွဲရာတွင် ဘာတခုမှ မရပဲ အရှုံးကြီး ရှုံးခဲ့ကြောင်းတင်ပြထားသော ဂျပန်တိုင်း သတင်းဖြစ်လေသည်။
ထို့ကြောင့် ဂျပန်မှ ၄င်းတို့၏ ယခုလုပ်ဆောင်လေလံဆွဲပွဲများတွင် နေပြည်တော် မှ မြန်မာပြည်အတွက် ဂျန်ပန်၏ လူသားအရင်းမြစ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများအကူညီ လိုအပ်ကြောင်း ကတိက၀တ် ပြုထားသော်ငြားလည်း မရှုမလှ ဆုံးရုံးရသောကြောင့် လက်ရှိ ကစားနေသော ကစားပွဲအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုလာပြီဟု ဂျပန် အစိုးရ အကြီးတန်း အရာ၇ှိမှ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလာပါသည်။